လှိုင်သာယာ #ကျန်စစ်မင်းအိမ်ရာတွင် ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေ တိုက်ခန်း ငှားမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19768083 အတွက် Aung Khaing Khant Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
လှိုင်သာယာမြို့နယ် FMI City အိမ်ရာအတွင်း တိုက်ခန်း ငှားမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19741979 အတွက် Aung Khaing Khant Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
လှိုင်သာယာ​မြို့နယ် #FMI City အဆင့်မြင့်အိမ်ရာ တိုက်ခန်းငှားမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19616435 အတွက် Aung Khaing Khant Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
လှိုင်သာယာမြို့နယ် အနော်ရထာလမ်းမပေါ်ရှိ လူနေဆိုင်ခန်း လုံးချင်အိမ် ငှါးမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19550017 အတွက် Aung Khaing Khant Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
FMI City အိမ်ရာ အတွင်း ၃၂ပေပါတ်လည် တိုက်ခန်း ငှါးမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19501138 အတွက် Aung Khaing Khant Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
လှိုင်သာယာ ကျန်စစ်သားအိမ်ယာတွင် တိုက်ခန်းဌားရန်ရှိသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19623912 အတွက် ဒေါ်စန်းစန်းငွေ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19568403 အတွက် ဒေါ်စန်းစန်းငွေ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19517907 အတွက် ဒေါ်စန်းစန်းငွေ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
နဝဒေးအိမ်ယာ ကျန်စစ်သားလမ်းမ ဆိုင်ခန်းအငှား
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19517903 အတွက် အိမ္ကမာၻ စက္မွဳဇုန္ ၊ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
အိမ္ကမာၻ စက္မွဳဇုန္ ၊ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း ပိတ်ရန်